इराकबाट अमेरिकी सेना किन फिर्ता जादैन? - Nepal Readers
Home » इराकबाट अमेरिकी सेना किन फिर्ता जादैन?
इराकबाट अमेरिकी सेना किन फिर्ता जादैन?
इरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारिएको प्रतिक्रियामा इराकी संसदमा ५ जनवरीमा इराकबाट अमेरिकी सैनिक हटाउनेको लागि प्रस्ताव पास गरियो । यो प्रस्ताव त्यो सम्झौताको रद्द गर्नको लागि थियो जसको कारण इराकमा अमेरिकी सैनिकको इस्लामिक स्टेट विरुद्ध लड्नको लागि रहने अनुमति मिलेको थियो ।
इराकमा अमेरिकी बल र इरान समर्थित बल ‘पपुलर मोबिलाइजेशन युनिट्स (पीएमएफ)’ बीच लगातार टकराव बढिरहेको छ । इराकी संसदमा अमेरिकी सैनिकलाई फिर्ता पठाउने प्रस्तावमा भोटिङ हुनुभन्दा पहिला इराकी प्रधानमन्त्री आदिल अब्दुल–महदीले अब विदेशी सेनाहरुले इराक छोड्नुपर्ने बताएका थिए । महदीको दावा थियो कि, जनरल सुलेमानी त्यस इलाकामा तनाव कम गर्ने कोशिस गरिरहेका थिए ।
इराकी संसदमा प्रस्ताव त पास भयो तर धेरैजसो कुर्दिश र सुन्नी सांसदहरुले यो प्रस्तावको बहिष्कार गरेका थिए । यो प्रस्तावको समर्थनमा मुख्य रुपले शिया पार्टी थियो । संसदमा केही सांसदले जोडका साथ भनेका थिए कि, इराकबाट विदेशी सेनाको फिर्ता पठाउनुपर्छ ।
एटलान्टिक काउन्सिलमा इराक इनिसियटिभको निर्देशक अब्बास खादिम भन्छन्– इराकको संसदमा भएको यो भोटिङ धेरै महत्वको छ । यो प्रतीकात्मक र वास्तविक दुवै मोर्चामा महत्व राख्दछ । यो भन्दा पहिले इराकमा २०११ मा पनि यस्तै गरिएको थियो । तब इराकीहरुले राष्ट्रहित भन्दा पहिला संप्रभुताको ध्यान दिएका थिए । इराकको सामुन्ने इरान र अमेरिका छन् । अहिलेको सरकारमा इरानको लागि सहानुभूति धेरै छ ।
स्काक्रोफ्ट सेन्टरमा स्ट्राटेजी एण्ड सेक्युरिटिज मिडल–इस्ट का निर्देशक क्रिस्टन फोन्टेरोजले एटलान्टिक काउन्सिलसँग भने– इराकको संसदमा पास भएको प्रस्ताव बाध्यकारी छैन । यो प्रस्ताव इराकको सरकारसँग भन्दछ कि, ऊ अमेरिकी सेनाको फिर्ता पठाउ । तर, अमेरिकाको इराकमा उपस्थिति सरकारको कार्यकारी निर्णयको आधारमा भएको थियो । यो फैसलाको रद्द केवल कार्यकारी निर्णयबाट मात्रै हुनसक्छ । इराकमा अहिले जुन सरकार छ यो कामचलाउ हो र उसँग यो मामलामा अहिले कुनै संवैधानिक अधिकार छैन ।
उनी भन्छन्– संसदमा भएको भोटिङबाट इराकी नेतृत्वको नियत बुझ्न सकिन्छ । यो प्रस्तावमा खुल्ला मतदान भएको थियो । यदि गोपनीय मतदान हुन्थ्यो भने परिणाम अरु नै आउँथ्यो ।
यही सँस्थाको उपनिर्देशक म्याथ्यु क्रोइंग भन्छन्– अमेरिकी सैनिक फिर्ता जान सक्छन् तर यो इराकको लागि पनि धेरै सजिलो भने हुनेछैन । यदि अमेरिकी सेना फिर्ता ग एभने इराकमाथि इरानको नियन्त्रण हुनेछ । यस्तो अवस्थामा इराकको सरकार यस्तो कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला दशपटक सोच्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार जोडका साथ भन्यो कि, अमेरिकी सेना इराकमा रहन्छ । ट्रम्पले भने– इराकबाट अमेरिकाको ५ हजार सैनिक फिर्ता भए भने इराकको लागि यो सबैभन्दा खराब हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने, इराकबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीको लागि यो सही बेला हैन ।
मंगलबार इराकको प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कि, अमेरिकी सेनाले सैनिक फिर्तीको लागि एक पत्र पठाए । मंगलबार समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यो विषयमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । हुन त, पछि यसलाई लिएर भ्रम पनि बढेको थियो ।
इराकका प्रधानमन्त्री अब्दुल महदीले भने कि, उसको सरकारलाई अँग्रेजी र अरबी भाषामा अमेरिकी सेनाको उक्त पत्र प्राप्त भएको थियो तर दुवै पत्र एकै प्रकारको भने थिएन । यस्तोमा इराकले यो मामलामा अमेरिकाद्वारा योजनामाथि स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
अब पेन्टागन, अर्थात अमेरिका रक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई स्वीकार गर्यो कि, अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेना फिर्ता गर्ने पत्र गल्तीले पठाईएको थियो ।
सिएनएनलाई मंगलबार दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्पर भन्छन्– त्यो पत्र ड्राफ्ट थियो र त्यसमा कसैको हस्ताक्षर थिएन । यस्तोमा त्यो पत्र इराकी अधिकारीको लागि कुनै महत्व राख्दैन । यसको कुनै मतलब छैन । उनले भने कि– म प्रष्ट पारिदिइरहेको छु कि, अमेरिकी सेनाको फिर्ती हुदैँछैन । यो विषयमा मेरो कुरा इराकी रक्षामन्त्रीसँग भएको छ । मैले भनिदिएको छु कि, सेना फिर्ताको लागि अहिले कुनै योजना छैन । हामी इस्लामिक स्टेटसँगको लडाइँ जारी राख्नेछौं, त्यो पत्र ड्राफ्ट मात्रै थियो, यो हाम्रो गल्ती थियो, जसमा कसैको हस्ताक्षर छैन र यो कहीँ जारी पनि गरिएको छैन । दोस्रोतर्फ इरान चाहन्छ कि, अमेरिका तत्काल इराकबाट बाहिर जाओस् ।
इरानको विदेशमन्त्री जवाद जरीफले सिएनएनलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने कि, मध्य–पूर्वमा जनता हामीसँग छन् । हामी यहाँको जनताको साथमा छौं । अमेरिकी राष्ट्रपति भनिरहेका छन् कि, उसको साथ केही ट्रिलियन डलरको सुन्दर हतियार छ । उसले बुझ्नुपर्दछ कि सुन्दर हतियारवाला दुनियाँमाथि शासन गर्न सक्दैन । दुनियाँमा शासन भनेको मान्छेको लागि हुन्छ । मध्य–पुर्वका मानिस अमेरिकाबाट दिक्क छन् । मानिसहरु चाहन्छन् कि अमेरिका यो क्षेत्रबाट चाडैँ फिर्ता जाओस् ।
इरानी विदेशमन्त्री भन्छन्– अमेरिका यो क्षेत्रमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । मानिसहरु चाहँदैनन् कि अमेरिका यहाँ रहोस् । राष्ट्रपति ट्रम्पको जुन सूचना मिलीरहेको छ त्यो सत्य हैन । अमेरिका पटकपटक आफ्नो गल्ती दोहो¥याउन सक्दैन । ट्रम्प मध्य–पुर्वको लागि र अमेरिकाको लागि पनि ठीक छैन ।
सद्दामको इराक र इरानबीच विवाद
सद्दाम हुसेनले आफूलाई अरब देशहरुको सबैभन्दा प्रभावशाली प्रमुख हुँ भन्ने सोच्न थालेका थिए । उसले सन् १९८० मा नयाँ इस्लामिक क्रान्तिको प्रभावको कमजोर गर्नको लागि पश्चिम इरानको सीमाहरुमा आफ्नो सेना उतारेका थिए । त्यसपछि ८ वर्षसम्म चलेको युद्धमा लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।
यस दौरानमा १९८२ जुलाइमा सद्दाम हुसेनले आफूमाथि भएको एक आत्मघाती हमलापछि शिया बाहुल्य दुजैल गाउँमा १४८ जनाको हत्या गरिदिएका थिए । मानवाधिकार उल्लघंनको यस्ता धेरै मामलाको बाबजुद अमेरिकाले यो हमलामा सद्दामको साथ दिएको थियो । इराक शिया बाहुल्य देश हो तर सद्दाम हुसेन सुन्नी थिए । यस्तोमा इरानमाथि इराकको शियाहरुको सहानुभूति सधैं रहिरह्यो ।
इरानमाथिको हमलामा इराकले के बोल्यो?
इराकी संसदको सभामुख मोहम्मद अल–हलबौसीले भने कि, इराकी सरकारको साथ यो अधिकार छ कि आफ्नो संप्रभूता बचाउनुपर्छ र मुलुकलाई युद्धको अखडा बनाउनुबाट रोक्नुपर्छ । उसले इराकको सबै पार्टीहरुलाई विवेकद्वारा काम गर्नको लागि आग्रह गरे । उनले भने कि, इरानले इराकको अमेरिकी सैन्य क्याम्पमाथि हमला उसको देशको संप्रभुताको उल्लङ्घन हो ।
मोहम्मद अल–हलबौसीले भने– इराकको सम्प्रभुता बनाउनको लागि सरकारले जरुरी कदम उठाउनु पर्दछ । इराकको बिनाकारणको युद्धको अखडा बनाइ रहिएको छ । हामी यो टकरावमा कुनै पार्टी हैनौं । बीबीसी